Wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya & warqabadka SBC International – SBC
Wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya & warqabadka SBC International
Ugu horeyn waxaan aad uga cudurdaareynaa dib u dhaca ku yimid wararka arimaha Soomaaliya ee aad kala socon jirteen website-ka SBC iyadoo ay ugu wacan tahay xaalada dilka hogaamiyaha shabakada Al-qaacida oo xiligan ah warka ugu weyn ee haatan saxaafada caalamku ay sida weyn isha hayso.
Warbaahinta SBC si la mid ah saxaafada aduunka waxaan siinay waqti dheeraad ah wararka ku aadan geerida Osama Bin Ladin, maadama xiligan warkan yahay warka ugu xiisaha badan ee sida weyn dadka aduunka ku dhaqan ay sida tooska ah ula socdaan. Hadaba si kasta oo aan idinkugu soo gudbin karno wararka arimaha Soomaalida ayaan idiin soo gudbin doonaa walow wararkeenu u badnaan doonaan arimaha dilka hogaamiyaha Al-qaacida.
Wararkii ugu dambeeyey ee arimaha Soomaalida oo aan soo koobnay
Roobab mihiigan ah oo ka da’ay magaalada Qardho & deegano ka mid ah Puntland
Wararka ka imaanaya magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar ayaa sheegaya in roobab xoogan ay caawa ka da’ayaan degmada Qardho iyo nawaaxigeeda iyadoo roobkan uu yahay mid aad u xoogan. Roobabkan oo ah kuwii Gu’ga ayaa si weyn uga curtey deegaano fara badan oo ka tirsan Puntland & waliba guud ahaan Soomaaliya.
Sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolada Mudug & Nugaal ayaa laga soo sheegayaa in ay ka da’een roobab, waxaana warqabadka SBC ay sheegayaan in roobab lagu diirsadey ay ku hooreen magaalooyinka Galdogob & Gaalkacyo oo ka tisran gobolka Mudug, halka degmada Burtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal iyo nawaaxigeeda laga soo sheego roobab xoogan oo aad loogu diirsadey.
Dab xoogan oo qabsadey suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyoodey dab xoogan oo maanta ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho , iyadoo dabkan uu saameeyey afar baqaar oo ku yaal suuqa.
Dabkan ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhashay xabbad ku soo dhacday Bakhaar ku yaala gudaha suuqa iyadoo dabku uu ku faafay bakhaaro kale kale oo ku dhawaa bakhaarka dabku ka bilowdey.
Bakhaarada dabku ka kacay oo ku yiil qaybta maacaanuunta & Huudhayda ayaa la sheegay inay gubatey dhamaan hantidii taalay, waxaana lagu guuleystey in la damiyo dankaasi ka dib markii ay gurmad xoogan sameeyeen ganacsatada suuqa bakaaraha & dadweynaha.
Sheekh Shariif oo la shiray saraakiisha ciidamada dawlada & kuwa AMISOM
Madaxweynaha DFKMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay taliyeyaasha ciidamada DFKMG ah aagaga dagaalka ee magaalada Muqdisho & kuwa ciidamada AMISOM.
Sheekh Shariif oo kulankaasi ka hadley ayaa ugu horeyn wuxuu mahadcelin u jeediyey saraakiisha iyo ciidamada dawlada & kwua AMISOM isagoo ku amaanay difaaca dalka & dadka Soomaaliyeed isagoo si gaar ah ugu hambalyey guusha ay gaarsiiyeen ciidamada Dawlada ee dagaalka kula jira kooxaha ka soo horjeeda dawladiisa.
Madaxweynaha ayaa sheegay in qof waliba oo ka mid ah ciidamada uu heli doono abaalmarintiisa darajo ee uu ku mutaysto waxqabadkiisa, isagoo taasi ku macneeyey in la joogo xiligii ay ciidamada qaranka heli lahaayeen abaalmarintooda, isagoo tilmaamay in dhismaha ciidamada Dawlada uu marayo halkii ugu sareeyey oo lagu faani karo waxqabadkooda.
Axmed Siilaanyo oo ku laabtey Somaliland ka dib booqasho oo ku tagey dalalka Carabata
Madaxweynaha maamulka la magac baxay Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo waftigii uu hogaaminayey ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Berbera.
Axmed Siilaanyo & wafdigiisa ayaa mudooyinkan safari kala duwan ku kala bixinayey wadamo ka tirsan gaar ahaan Imaaraadka Carabta & Kuwait, iyadoo safarkaasi oo qaatey mudo 17 maalmood ah la sheegay in Axmed Siilaanyo uu kala hadlayey madaxda dalalka uu tagey arimaha Somaliland iyo sidii loo gacan siin lahaa maamulkiisa.
Axmed Siilaanyo oo ka hadley safarkiisii markii uu soo gaaray magaalada Berbera oo si weyn loogu soo dhaweeyey wuxuu sheegay in uu kala soo haldey madaxda wadamada uu booqdey sida uu sheegay adkeynta xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Somaliland iyo wadamadaasi, isagoo sidoo kale sheegay in uu kala haldey arimo la xiriira wax wada qabsi dhinacyo badan balse aanu si buuxda carabka ugu dhufan nooca uu yahay.
Ra’isalwasaaraha DFKMG ah oo Muqdisho kula kulmey wafdi ka socda Qaramada Midoobay
Ra’isalwasaaraha DFKMG ah ee Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho wuxuu kulan kula qaatey wafdi ka socdey qaramada Midoobay oo uu hogaaminayey u qaysanaha qaramada mudoobay ee arimaha bini’aadanimada Soomaaliya Mark Bowden.
Kulankaani oo saacado qaatey ayaa waxay labada dhinac uga hadlayeen arimaha bini’aadamtnimada ee Soomaliya iyo sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka dhibaatooyinka dhinaca nolosha ay ku heysato gobolada dalka gaar ahaan kuwa abaaraha xoogani ka taaganyihiin. Wasiirka iskaashiga iyo xiriirka Caalamiga ah ee DFKMG ah ee Soomaaliya Cabdi wali Max’ed Cali oo saxaafada la hadley kulankaasi ka dib ayaa sheegay wafdiga qaramada midoobay ay kala hadleen sidii loo caawin lahaa oo waxqabad deg deg ah loo gaarsiin lahaa dadka dhibaatooyinku ku haystaan Soomaaliya.
Mark Bowden oo isna la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsantahay xaalada bini’aadanimo ee Soomaaliya, isagoo sheegay in qaramada midoobay ay sii wadeyso dadaalka howlaha bini’aadanimo ay ku gaarsiinayaan dadka ku dhibaateysan gudaha dalka Soomaaliya.
“ aad ayaan ugu walaacsanahay dhibaatada dadka shacabka ah heysta, waxa ay mareysaa meelihii ugu darnaa marka loo bar bar dhigo dunida inteeda kale, dhibaatooyinka aad ayay u farabadanyihiin abaaraha iyo colaadaha dadka Soomaalida waa ay saameeyeen, sidaasi daraateed waxan aan jecelnahay in aan gaarsiino dadka Soomaaliyeed kaalmooyin bini’aadanimo oo deg deg ah” ayuu yiri Mark Bowden.
Wariyeyaasha SBC International